POPULAR NEWS – CTUM
၁၄. ၅. ၂၀၁၉ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ————————————- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ခန်းမ(၄)တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများက အလုပ်သမားတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေး၊ အလုပ်သမားဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် လာရောက်တင်ပြခြင်း Crd Admin from Phyo Min Thein Page
Trainers Training Module I, Organized by LO/FT-CTUM, 31 August to 02 September 2017 CTUM သင်တန်းခန်းမ၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၏ (LO/FTF Council- Danish Trade Union Council for International […]